Fanaovam-baksiny: 500 000 dolara avy amin’ny masoivohon’i Sina | NewsMada
Fanaovam-baksiny: 500 000 dolara avy amin’ny masoivohon’i Sina
Vita Sonia, omaly tetsy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny masoivon’i Sina sy ny minisiteran’ny Fahasalamana. Mitentina 500 000 dolara ny vola nomen’ny Sinoa hanamafisana ny fanaovam-baksiny ny zaza eto Madagasikara.
Manodidina ny 900 000 isan-taona ireo ankizy tratrarina hovitaina vaksiny. Hametrahana toerana fanaovam-baksiny avokoa ireo tobim-pahasalamana rehetra manerana ny Nosy hanamorana ny fitondran’ny ray aman-dreny ny zanany hanao vaksiny.
Hatramin’izay, niantehitra tamin’ny hetsika fanaovam-baksiny faobe atao natin’ny fotoana voafetra ihany i Madagasikara tao anatin’ny taona maro. Tsy ampy anefa izany fa mila mihitsy apetraka amin’ny tobim-pahasalamana ny fanaovam-baksiny hanatrarana ny tanjona. Tsy voatery intsony hiandry hetsika manokana, araka izany, ireo ray aman-dreny rehefa hitondra ny zanany fa afaka avy hatrany manatona toeram-pitsaboana rehefa hanao vaksiny ny zanany.